Mpanamboatra sy mpamatsy fonosana famarotana ambongadiny | Sheerfond
Ity dia vokatra vita amin'ny hoditra !, fampiasa finday sy mpihazona finday, miaraka amin'ny charger famahanana tsy misy tariby, azonao atao ny manamboatra endrika, logo na fonosana.
Misy fomba roa hametrahana ny telefaona, ny efijery marindrano na ny écrise mitsangana. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, ny mpihazona finday dia afaka miantoka fa azo sarohina ny telefaona rehefa eo amin'ny efijery marindrano na mitsangana ny telefaona. Mandritra ny famandrihana dia azonao atao ny mijery horonan-tsary amin'ny telefaona amin'ny;
Azo aforitra izy, 8mm monja ny hateviny aorian'ny aforitra, ary azo ampidirina am-paosy.
Izy io koa dia mpihazona penina miaraka amina toeran'ny fampidirana pen eo an-damosin'ny tompony, ary vokatra fitehirizana ho an'ny birao.
Tonga lafatra ve ity vokatra ity? Manantena izahay fa ny tombotsoanay amin'ny famolavolana vokatra dia afaka mitondra traikefa tsara ho anao sy ny mpanjifanao.
Ity vokatra Creative ity dia Eco friendly, mampiasa fitaovana Degradable
Ny charger tsy misy tariby Qi dia mamaly haingana 10W, 15W ho an'ny telefaona, toy ny iphone 12
Ny charger tsy misy tariby noforonina no vokatrao farany,
finday charger dia azo ampiasaina amin'ny fanomezana fampiroboroboana orinasa, Manomeza fanomezana ho an'ny orinasa, fanomezana maimaim-poana na fanomezana hafa,
Ny kojakoja iphone dia hevitra vaovao momba ny vokatra paoma sy finday hafa,
Ny orinasako dia orinasa OEM sy ozinina elektronika, mpamatsy Wal-Mart ihany koa izahay. Ny akora, ny fizotran'ny famokarana ary ny vokatra vita dia voasedra 100% hahazoana antoka fa vokatra rehetra dia vokatra mendrika.
fahan'ny 9V1.5A / 5V2A
Accessories tariby bitika
Famandrihana tsy misy tariby Gr10W / 7.5W / 5W
Sehatra fampiasana Pr fanomezana fanomezana vaovao,
haben'ny vokatra 370mm * 75mm * 4mm
fonosana habe 200mm * 78 * 15mm
Isa isaky ny boaty
Milanja isaky ny boaty 16kg
Teo aloha: Kitapom-batsy herinaratra finday tsy misy vidiny
Manaraka: Saron-tava masaka Graphene